▷ Laptọọpụ DELL kacha mma || Ntụnyere TOP 5 2022
La American ika Dell O nwere ụfọdụ ụdị laptọọpụ kacha mma na ahịa. Ma ọ bụghị naanị n'ihi nhazi ngwaike nke otu ndị a na-agụnyekarị, ma ha na-enyekwa nhazi siri ike, nnwere onwe dị mma, ihe ndị dị mma, ịdị arọ dị arọ na ihe niile a na-enweta site na ezigbo laptọọpụ.
1 Laptọọpụ Dell kacha mma
2 Ụdị laptọọpụ Dell
2.3 G usoro
3 Kedu ihe kpatara Dell ji bụrụ otu n'ime ụdị laptọọpụ kacha mma?
4 Dell laptọọpụ, echiche m
5 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Dell n'ọnụ ahịa kacha mma
Laptọọpụ Dell kacha mma
n'etiti kacha mma Dell laptọọpụ Enwere ụfọdụ ụdị ego dị ka ndị a:
Dell Latitude Latitude ...
Ụdị laptọọpụ Dell
Ụlọ ọrụ Dell nwere ọtụtụ usoro na ụdị ezubere maka ndị ọrụ dị iche iche. N'ụzọ dị otú ahụ ọ pụrụ igbo mkpa niile.
Usoro a nwere ụdị laptọọpụ Dell emebere maka ihe niile site na ịnyagharị webụ ruo na ige egwu, ọdịnaya gụgharia, akpaaka ụlọ ọrụ na ọbụna egwuregwu. Ọ bụ ezigbo ihe nlereanya maka iji ụlọ ma nwee ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.
Dell XPS bụ kọmpụta 2-in-1 emebere iji nye ọmarịcha arụmọrụ yana ahụmịhe ọhụụ kachasị mma, yana onyonyo mara mma yana nghọta kacha. Na mgbakwunye, a na-emecha ha na ihe ndị dị mma, ìhè na ultra-thin maka njem kacha mma na nso nso.
Usoro Dell G yiri Alienware. N'ezie, ha na-eji ihe ngwọta ọkụ sitere n'ike mmụọ nsọ nke ndị ọzọ a, na mgbakwunye na ịkwalite Intel Core na AMD Ryzen CPUs dị elu, na mgbakwunye na NVIDIA GeForce RTX 3000 Series GPUs. Ya bụ, e mere ha ka ha na-arụ ọrụ dị ukwuu n'ọtụtụ ọrụ, nakwa maka egwuregwu vidiyo.
Oke Latitude gụnyekwara kọmpat, dị fechaa na akwụkwọ ndetu 2-in-1 nke emebere nke ọma. E kere ha ka ha na-ebuli arụpụta ihe, na-eche echiche maka ị nweta nsonaazụ dị mma n'ihe gbasara njikọta na njem. Ha bụ ngwa dị mma na nchekwa nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na gburugburu azụmahịa.
Laptọọpụ nkenke Dell…
Ha karịrị naanị laptọọpụ. Nkenke bụ ụlọ ọrụ arụpụtara ka ọ bụrụ nke mbụ na ngalaba ha. Ha na-enye arụmọrụ ngwaike dị elu na arụmọrụ dị elu, yana ịbụ ndị a pụrụ ịdabere na ya na nhazi zuru oke maka iji ndị ọkachamara. N'ezie, ọnụahịa ya dị elu karịa usoro ndị ọzọ dị ka Vostro, XPS ma ọ bụ Inspiion.
Usoro isiokwu a nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche na ọnụ ahịa dị mma yana nhazi arụmọrụ kwesịrị ekwesị, yana ma ibe Intel na AMD. Na mgbakwunye, ha na-agụnye Microsoft nke etinyegoro mbụ Windows 10 Pro ụdị, nke na-agbakwunye ụfọdụ atụmatụ nchekwa na nke ọma emebere maka gburugburu azụmahịa. Tinye na nke ahụ nnukwu nkwado obere azụmaahịa.
Alienware bụ akara Dell maka PC egwuregwu na-arụ ọrụ dị elu. Otu ndị a adịghị kọmpat dị ka ndị ọzọ, ma ha nwere nnukwu ibu dị elu. Kama, ha na-enye nhazi ngwaike dị ike nke ukwuu iji nweta nsonaazụ kacha mma. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchọta nhazi na Intel Core i9 CPU na kaadị eserese NVIDIA GeForce RTX 3000. N'ezie, ha emewokwa ka sistemu jụrụ oyi dabara na ihe ndị a.
Dell na-ebukwa Chromebooks, ya bụ, laptọọpụ nwere nhazi ngwaike dị ntakịrị karịa nke emebere iji nweta uru nke ọrụ igwe ojii. Na mgbakwunye, a na-akwado ha site na sistemụ arụmọrụ Google Chrome OS. Sistemu siri ike, kwụsiri ike yana nchekwa yana ngwa gam akporo dakọtara na obodo. Ụdị ngwá ọrụ a dị mma maka ndị ọrụ na-achọ ihe a pụrụ ịdabere na ya na ọnụ ala ma ọ bụ maka ụmụ akwụkwọ.
Ha gụnyere atụmatụ ntụkwasị obi Latitude na Chrome Enterprise maka ahụmihe ígwé ojii echekwara nke ọma, ịrụ ọrụ dị elu, yana nkwalite nrụpụta.
Kedu ihe kpatara Dell ji bụrụ otu n'ime ụdị laptọọpụ kacha mma?
Ụdị Dell bụ ụlọ ọrụ America bụ ọkachamara na mgbakọ kọmputa dị iche iche ruo ọtụtụ iri afọ. N'ezie, ọ bụ onye nrụpụta nke atọ kachasị ukwuu n'ụwa dị n'azụ Lenovo na HP, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ndị isi ụlọ ọrụ. Nke a na-eweta obi ike dị ukwuu na onye ọrụ na ụdị ha na-abụ mgbe niile nkwa nke mma na arụmọrụ dị mma.
Isi ihe ọzọ dị mma nke kọmpụta ndị a bụ nkwa nke Dell na ọrụ ọrịre ahịa na-enye. Tụkwasị na nke ahụ, site na ebe nrụọrụ weebụ ya ọ na-enye ọrụ iji hazie nhazi na ịhazi ngwaike nke akụrụngwa a họọrọ, ihe ndị na-emepụta ihe ndị ọzọ anaghị enyekarị. Ya bụ, ị nwere ike ime a laptọọpụ fọrọ nke nta ka a na-achọ (ịhọrọ processor, RAM, diski ike, ...).
Dell laptọọpụ, echiche m
Dell na-abụkarị akara nke na-agba ọsọ na atụmatụ maka ndị ọkachamara, nke enwere ike ịhụ na àgwà, ike na ntụkwasị obi nke otu ha. Karịsịa ụdị dị iche iche maka mpaghara azụmahịa, dị ka Latitude, nke nwere otu n'ime ikpe kachasị ike na ahịa.
Ha na-agbakwasara anya nweta ogologo ndu dị ịrịba ama, ya mere, nsogbu ndị dị na ụdị akwụkwọ ndetu a dị n'okpuru nkezi. Ọ bụ ya mere a na-atụ aro ya nke ukwuu maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị chọrọ ngwá agha dị mma, ma ọ bụ maka ndị ọrụ ụlọ na-achọ ihe na-agaghị ada ha n'oge dị mkpirikpi.
Uru ọzọ nke otu ndị a bụ na osisi mgbakọN'adịghị ka ụdị ndị ọzọ, a naghị ahụ ya na Asia, ma na Europe, kpọmkwem na Poland. Ihe na-egosi na àgwà ọma.
Otú ọ dị, otu n'ime ọghọm ya N'ime otu ndị a nwere ike ịbụ ibu nke ụfọdụ ụdị, nke nyere ihe na nkwalite na-adịkarị arọ karịa ndị ọzọ ...
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Dell n'ọnụ ahịa kacha mma
para cỊzụta laptọọpụ Dell na ọnụ ahịa dị mma, ị nwere ike ịhụ ya n'ebe dị iche iche nke ire ere, n'ime nke ndị na-esonụ pụtara:
Ụlọikpe Bekee: ụlọ ahịa ndị Spen nwere ụfọdụ ụdị Dell na ngalaba IT ya. Ọnụ ahịa ha abụghị nke kacha mma n'ahịa, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ, ha na-enwe ego dị ka Technoprices ebe enwere ike zụta ha dị ọnụ ala. Na mgbakwunye, ị nwere ike họrọ n'etiti usoro ịzụrụ ihu na ihu ma ọ bụ rịọ ya site na webụsaịtị ya.
Mgbasa ozi: Otu n'ime ihe ndị pụtara ìhè na agbụ German bụ ọnụ ahịa dị mma nke ngwaahịa ya. Nke a na-emetụtakwa ụdị Dell nke ha nwere na ngwaahịa ha, n'agbanyeghị na ị gaghị ahụ ha niile. Ọzọ ị nwere ike họrọ ịzụta online ma ọ bụ gaa na otu n'ime ebe ọ na-ere.
Websaịtị: Dell na-enyekwa ebe a na-ere ahịa kpọmkwem, ebe ị nwere ike ịchọta usoro na ụdị niile, yana inwe ike ịhazi nhazi.
Amazon: The online ahịa n'elu ikpo okwu bụ otu n'ime ọkacha mmasị, ebe ọ nwere ọtụtụ ndị na-enye nke Dell laptọọpụ na niile ụdị ị pụrụ iche n'echiche. Ọ bụrụ na ị nwere ndenye aha Prime, ị nwekwara ike irite uru na ụfọdụ uru, dị ka ụgwọ mbupu efu yana na ngwaahịa gị abịarute na mbụ. N'ezie, ọ bụkwa ụzọ dị mma iji zụta yana nkwa niile.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » Dell laptọọpụ